Nezvedu - Shaoxing Starke Textile Co., Ltd.
SHAOXING STARKE TEXTILE CO., LTD yakavambwa muna2008, ichishandisa machira akarukwa uye jira rakarukwa.
Yese kambani ine yayo tsika. Starke nguva dzose inonamira kune yayo yekutengesa uzivi, "Mutengi Kutanga, Anoshuvira Kufambira Mberi". Kubva pamisimboti ye "Kutendeseka Kutanga", tiri kusimbisa kuhwina-kuhwina kudyidzana nevatengi vedu vanokudzwa, uye kushanda pamwe kuti tiwane kubudirira kwevatengi nekugadzira inozivikanwa brand "STARKE"!
Bhizinesi rakabudirira rinoenderana nechikwata chakanaka. Starke ine nyanzvi uye ine hunyanzvi timu yekutengesa iri pasi pehutungamiriri hwakanaka. Neshungu nesimba, timu yedu inogara iri pano kuti ipe basa rakazara uye remhando yepamusoro. Chinangwa chedu ndechekupa mhinduro dzakaringana uye dzinogutsa kune zvakasiyana zvinodiwa nevatengi vedu uye nekumisikidza hukama hwakareba navo.
Yedu kambani ine zvitupa senge GRS, OEKO-TEX 100, uye edu akabatana kudhaya uye kudhinda mafekitori anewo zvimwe zvitupa senge OEKO-TEX 100, DETOX, nezvimwe. Mune ramangwana, isu tichaedza kugadzira machira akashandiswazve uye kubatsira munharaunda yepasi rose.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndezvekuti: mativi, Berber Fleece, 100% Cotton CVC 100% Polyester Imwe Jersey, Beads Fishnet Mucheka, Honeycomb Mucheka, Rib Fabric, Warp-dzakarukwa Mesh, 4-nzira Spandex Mucheka, nezvimwewo Yedu Yakarukwa Micheka inosanganisira T / R Suiting Mucheka, 100% Cotton / PC Kushanda Mucheka, 100% Cotton Anoshanda Dhayi Yakadhindwa Mucheka uye 100% Cotton / TC / TR Jacquard Jira